‘एच वान बी भिजा’ संसोधन प्रक्रिया अमेरिकी संसदमा, गैरअमेरिकीको जागिर संकटमा ! Bizshala -
काठमाण्डौ । नेपाल, भारत जस्ता मुलुकका दक्ष कामदारलाई अमेरिकामा हाइटेक जागिरका लागि स्वीकृति दिने ‘एच वान बी भिजा’का विद्यमान प्रावधानहरुमा ठूलो बदलावको प्रस्ताव दोश्रो पटक पुनः पेश गरिएको छ । यो भिजा प्रक्रिया तथा अधिकांश प्रावधानहरुमा बदलावको माग गर्दै दुई सांसदले अमेरिकी संसदमा विधेयक पेश गरेका हुन् । ती सांसदहरुको दाबी अनुसार यो संसोधन विधेयक पास भएपछि कामदार भिजामा लामो समयदेखि हुँदै आएको दुरुपयोग रोकिनेछ ।
एजेन्सीहरुका अनुसार अमेरिकाका रिपब्लिकन सांसद डेरेल इसा र स्कट पिटर्सले हिजो ‘प्रोटेक्ट एण्ड ग्रो अमेरिकन जब्स एक्ट’ नामको विधेयक संसदमा पुनः पेश गरेका हुन् । यसमा एच वान बी भिजाको अधिकांश प्रावधानमा निकै ठूलो परिवर्तनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो विधेयकमा एच वान बी भिजाको न्यूनतम तलब वार्षिक १ लाख डलर कायम गर्नुपर्ने तथा मास्टर डिग्रीलाई छुट दिने प्रावधान समेत अन्त हुनुपर्ने मुद्धा समेटिएको छ । यी दुई सांसदले यो विधेयक पास भएपछि भिजा दुरुपयोग मात्र नरोकिने, बरु विश्वका सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाले मात्र नोकरी पाउँछन् भन्ने कुराको समेत प्रमाणित हुने दाबी गरेका छन् ।
कतिपय कम्पनी जस्तै, मसलन डिज्नी, सोकाला एडिसन तथा अन्यमाथि लामो समयदेखि एच वान बी भिजा दुरुपयोगको आरोप लाग्दै आएको छ । यस्तै अमेरिकी नागरिकलाई यस्ता कम्पनीले कामबाट निकालेर सस्तोमा विदेशी कामदारलाई राख्ने गरेका र यसले अमेरिकी जनताको रोजगारीको हक खोसिएको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएदेखि नै डोनाल्ड ट्रम्पले समेत केही कम्पनीहरुको नामै किटेर एच वान बी भिजा दुरुपयोग जसरी पनि रोक्ने र अमेरिकन कम्पनीहरुमा रोजगारीको पहिलो अवसर अमेरिकी नागरिकहरुलाई प्राप्त हुने प्रणालीको विकास गर्ने यसअघि नै घोषणा गरिसकेका छन् । उनले एच वान बी भिजाका प्रावधानमा कडाई गर्ने घोषणा गरेपछि यी दुई सांसदले सो सम्बन्धी विधेयक संसदमा दोश्रो पटक पेश गरेका हुन् ।
h1bvisa usa
उत्तरकोरियाको तेल सप्लाईमा चीनको कैंची, कपडा आयातमा
काठमाण्डौ । चीनले उत्तर कोरियामा भइरहेको तेल आपूर्ति कटौति गरेको छ...
काठमाण्डौ । विश्वकै सबैभन्दा धनी महिलाको ९४ वर्षको उमेरमा निधन...
एप्पलका लगानीकर्ताको क्षणभरमै १.४४ लाख करोड स्वाहा !
काठमाण्डौ । सेयर बजार संवेदनशील ठाउँ हो । यहाँ कुनै पनि ठूला...
मेक्सिको भूकम्पको डरलाग्दो दृश्य, हेर्दा हेर्दै ढले
काठमाण्डौ । मेक्सिकोमा शक्तिशाली भूकम्पका कारण मृत्युु हुनेको...
अमेरिकी ग्रीनकार्ड पाउन थप कठीन, विशेष अन्तरवार्ता दिनुपर्ने
काठमाण्डौ । अमेरिकाको स्थायी भिजा(ग्रीन कार्ड) प्राप्तिको इच्छा...
भाग्य होस् त यस्तो, ८० अर्बको चिठ्ठा जित्ने यी महिला !
काठमाण्डौ । उत्तर अमेरिकाको इतिहासमै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो...
जोन्सन पाउडर प्रयोगले क्यान्सर, ४२.५ हजार करोड क्षतिपूर्ति
काठमाण्डौ । अमेरिकाको एक अदालतले बेबी प्रोडक्ट बनाउने चर्चित...
रामदेवको रिटेलिङ साम्राज्यलाई रविशंकरले टक्कर दिने !
काठमाण्डौ । पतञ्जलीको रिटेलिङ साम्राज्यलाई अब अर्का एक आद्यात्मिक...